Xirmooyinka Vacuum - Utien Pack Co,. Ltd.
Kordhi nolosha alaabada
Baakadaha Vacuum waxay hoos u dhigi kartaa koritaanka iyo taranka noolaha iyadoo laga saarayo gaaska dabiiciga ah ee ku jira baakadka, si loo kordhiyo nolosha alaabada. Marka la barbardhigo alaabada baakadaha caadiga ah, alaabada baakadaha faakiyuumka waxay yareyneysaa booska alaabtu degtay.
Baakada Vacuum waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada cuntada, alaabada caafimaadka iyo alaabada macaamiisha ee wax soo saarka.
Baakada Vacuum-ka waxay haysaa tayada cuntada iyo macaankaba muddo dheer. Ogsajiinta ku jirta xirmada waa laga saarayaa si looga hortago taranka noolaha aerobic iyo hoos u dhigida howsha oksaydhka. Alaabada macaamiisha iyo alaabada warshadaha, baakadaha faakiyuumku waxay ka ciyaari karaan doorka boodhka, qoyaanka, ka hortagga daxalka.
Baakada Vacuum waxay u isticmaali kartaa mashiinka baakada thermoforming, mashiinka baakadaha qolka iyo mashiinka baakada wax lagu rido ee baakada ee baakadaha. Maaddaama ay tahay qalab baako si otomaatig ah u shaqeynaya, mashiinka baakadaha ee thermoforming wuxuu isku daraa baakadaha internetka, buuxinta, xirashada iyo goynta, taas oo ku habboon qaar ka mid ah shuruudaha wax soo saar leh oo leh baahi soo saar sare. Mashiinka baakadaha godka iyo mashiinka baakadaha wax lagu rido ee banaanka ayaa ku habboon qaar ka mid ah shirkadaha wax soo saarka ee yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, iyo bacaha faakiyuumka ayaa loo isticmaalaa baakadaha iyo shaabadaynta.
Mashiinka Baakadaha Dabacsan ee Thermoforming
Mashiinka Vacuum Double Chamber
Mashiinka Vacuum Chamber